ကျောပေးထားတဲ့ ကလေးငယ်ကို အပီအပြင် အလစ်ချောင်းပြီး ခုန်အုပ်ခဲ့တဲ့ ခြင်္သေ့မကြီး – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Knowledge ကျောပေးထားတဲ့ ကလေးငယ်ကို အပီအပြင် အလစ်ချောင်းပြီး ခုန်အုပ်ခဲ့တဲ့ ခြင်္သေ့မကြီး
ကျောပေးထားတဲ့ ကလေးငယ်ကို အပီအပြင် အလစ်ချောင်းပြီး ခုန်အုပ်ခဲ့တဲ့ ခြင်္သေ့မကြီး
အမေရိကန်နိုင်ငံ လူဝီစီယားနားပြည်နယ် နယူးအော်လိန်းစ်မြို့က အော်ဒူဘွန်းတိရစ္ဆာန်ရုံမှာ ကလေးတွေကို ခုန်အုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ခြင်္သေ့မတစ်ကောင်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ Insider သတင်းအရ ၎င်းခြင်္သေ့မဟာ အသက် (၃) နှစ်အရွယ်ရှိ ဇူရီလို့သိရပါတယ်။ ဇူရီဟာ လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးတစ်ယောက်ကို ချုံကွယ်ကနေ သေချာချောင်းမြောင်းနေခဲ့တာပါ။ ကလေးက သတိပြုမိပြီး တစ်ဖက်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ဇူရီဟာ ခုန်အုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက် သေချာချိန်ပြီး ခုန်အုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဇူရီဟာ ကလေးကို မဖမ်းမိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူနဲ့ ကလေးငယ်ကြားမှာ မှန်နံရံကြီးက ကာဆီးနေတာကြောင့် ဇူရီဟာ ဒွိဟဖြစ်သွားပုံရပါတယ်။ သူ့ရှေ့မှာ ကာဆီးထားတဲ့အရာဟာ ဘာများဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုပြီး သူမဟာ တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့ ပြောပုံအရတော့ ဇူရီဟာ လူတွေကို စောင့်ကြည့်ရတာနဲ့ လိပ်ပြာတွေလိုက်ဖမ်းရတာကို ဝါသနာပါကြောင်း သိရပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ခြင်္သေ့ရုံထဲက မှန်ကို ကျောပေးထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ရုံပိုင်တွေဟာ ဧည့်သည်တွေကို တစ်စုံတစ်ရာ အပြစ်မဆိုခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်လည်း ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ထိခိုက်စေမယ့် အရာမျိုးကို ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာမျိုးတော့ ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဗီဒီယိုအတိုင်းဆိုရင် တကယ်လို့ ဇူရီသာ မှန်ရှေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အရှိန်မလျှော့မိခဲ့ရင် မှန်ကို အရှိန်နဲ့ ဝင်ဆောင့်နိုင်ပြီး သွားတွေ ကျိုးကုန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ မှန်ကို ခေါက်တာ၊ အစာနဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေ ပစ်သွင်းတာ၊ မခံချင်အောင် စနောက်တာမျိုးတွေ မလုပ်ကြဖို့လည်း တိရစ္ဆာန်ရုံက သတိပေးထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လူဝီစီယားနားျပည္နယ္ နယူးေအာ္လိန္းစ္ၿမိဳ႕က ေအာ္ဒူဘြန္းတိရစာၦန္႐ုံမွာ ကေလးေတြကို ခုန္အုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ျခေသၤ့မတစ္ေကာင္ရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ဟာ အြန္လိုင္းမွာ ျပန႔္ႏွံ႔ေနပါတယ္။ Insider သတင္းအရ ၎ျခေသၤ့မဟာ အသက္ (၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ဇူရီလို႔သိရပါတယ္။ ဇူရီဟာ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ခ်ဳံကြယ္ကေန ေသခ်ာေခ်ာင္းေျမာင္းေနခဲ့တာပါ။ ကေလးက သတိျပဳမိၿပီး တစ္ဖက္လွည့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ဇူရီဟာ ခုန္အုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေလာက္ ေသခ်ာခ်ိန္ၿပီး ခုန္အုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဇူရီဟာ ကေလးကို မဖမ္းမိႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ သူနဲ႔ ကေလးငယ္ၾကားမွာ မွန္နံရံႀကီးက ကာဆီးေနတာေၾကာင့္ ဇူရီဟာ ဒြိဟျဖစ္သြားပုံရပါတယ္။ သူ႔ေရွ႕မွာ ကာဆီးထားတဲ့အရာဟာ ဘာမ်ားျဖစ္လိမ့္မလဲဆိုၿပီး သူမဟာ ေတြးေကာင္းေတြးႏိုင္ပါတယ္။
တိရစာၦန္႐ုံရဲ႕ ေျပာပုံအရေတာ့ ဇူရီဟာ လူေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ရတာနဲ႔ လိပ္ျပာေတြလိုက္ဖမ္းရတာကို ဝါသနာပါေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ ျခေသၤ့႐ုံထဲက မွန္ကို ေက်ာေပးထားတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ႐ုံပိုင္ေတြဟာ ဧည့္သည္ေတြကို တစ္စုံတစ္ရာ အျပစ္မဆိုခဲ့ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္လည္း ဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ တိရစာၦန္ေတြ ထိခိုက္ေစမယ့္ အရာမ်ိဳးကို ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္တာမ်ိဳးေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗီဒီယိုအတိုင္းဆိုရင္ တကယ္လို႔ ဇူရီသာ မွန္ေရွ႕ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အရွိန္မေလွ်ာ့မိခဲ့ရင္ မွန္ကို အရွိန္နဲ႔ ဝင္ေဆာင့္ႏိုင္ၿပီး သြားေတြ က်ိဳးကုန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ မွန္ကို ေခါက္တာ၊ အစာနဲ႔ အျခားပစၥည္းေတြ ပစ္သြင္းတာ၊ မခံခ်င္ေအာင္ စေနာက္တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ၾကဖို႔လည္း တိရစာၦန္႐ုံက သတိေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
သိန်းရာချီအဖိုးတန်ပြီး ဆေးဝါးဖော်စပ်ရာနှင့် အလှကုန်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော တန်ဖိုးကြီး ငါးစီဖေါင်းများအကြောင်း….သိန်းရာချီအဖိုးတန်ပြီး ဆေးဝါးဖော်စပ်ရာနှင့် အလှကုန်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော တန်ဖိုးကြီး ငါးစီဖေါင်းများအကြောင်း….
သိန်းရာချီအဖိုးတန်ပြီး ဆေးဝါးဖော်စပ်ရာနှင့် အလှကုန်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော တန်ဖိုးကြီး ငါးစီဖေါင်းများအကြောင်း…. “တန်ဖိုးကြီး ငါးစီဖေါင်းနှင့် အသုံးဝင်ပုံများ” ငါးစီဖေါင်းကို အင်္ဂလိပ်လို Swimbladder (or) Air Bladder (or) Fish Maw ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ...
သူတောင်မခေါ်ပဲ နေနိုင်သေးတာ ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲနေမယ်ဆိုတဲ့မာနလေး ရှိချင်တယ်သူတောင်မခေါ်ပဲ နေနိုင်သေးတာ ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲနေမယ်ဆိုတဲ့မာနလေး ရှိချင်တယ်
သူတောင်မခေါ်ပဲ နေနိုင်သေးတာ ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲနေမယ်ဆိုတဲ့မာနလေး ရှိချင်တယ် သူတောင်မခေါ်ပဲ နေနိုင်သေးတာ ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲနေမယ်ဆိုတဲ့မာနလေး ရှိချင်တယ် သို့သော် . . . ကျွန်မ မထားနိုင်ခဲ့ဘူး လူတချို့ပြောသလိုပါပဲ ကျွန်မလဲ စျေးပေါပါတယ် . ...
ကိုယ့်အမှားမပါဘဲ တကူးတကကြီးထိုးနှက်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရှင်သန်ဖူးလား…??ကိုယ့်အမှားမပါဘဲ တကူးတကကြီးထိုးနှက်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရှင်သန်ဖူးလား…??
ကိုယ့်အမှားမပါဘဲ တကူးတကကြီးထိုးနှက်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရှင်သန်ဖူးလား…?? ကျွန်မကတော့ ရှင်သန်ဖူးခဲ့ပြီ…မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကိုယ့်ကြောင့်ပဲဖြစ်လာသလိုမျိုးကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်ကြောင့်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကြားထဲမှာရှင်သန်ဖူးခဲ့ပြီ… ။ကိုယ်တောင်ဘာမှမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကြောင့်ဆိုပြီး ပြောဆိုနေတာတွေကိုကြုံဖူးခဲ့ပြီ…။ ဒီလိုခံစားချက်တွေကိုကျွန်မဘယ်လိုတွန်းလှန်ရမလဲ မသိဘူး..ကိုယ့်ထက်အကြီးတွေဆီကအကူညီတွေလည်း အများကြီးယူခဲ့ရတယ်.. ပြောစကားတွေအများကြီးနားထောင်ခဲ့ရတယ်။။တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဖြေကတော့ကိုယ်မလုပ်တဲ့ အမှားတစ်ခုအတွက်ကိုယ်လိုက်ခံစားနေဖို့ မလိုသလို အပြစ်ရှိသလို ခံစားဖို့လည်း မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာပါပဲ… လောကမှာရှိသမျှ အမှား‌တိုင်းကကိုယ်တစ်‌ယောက်တည်းကြောင့် ...